कारोनाको पहिलो आक्रमण फोक्सो! कसरी सफा गर्न सकिन्छ फोक्सो ? - Gokarna News from Nepal
कारोनाको पहिलो आक्रमण फोक्सो! कसरी सफा गर्न सकिन्छ फोक्सो ?
काठमाडौं – पछिल्ले समय कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट विश्व आक्रान्त छ । विश्वभर आधा कोरोड मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छने भने ३ लाख ३० हजार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोनाकोपहिलो आक्रमण फोक्सोमा हुने हुनाले मानिसलाई तत्कालै स्वासप्रस्वासमा समस्या ल्याउने ज्वरो आउने लगाएतका छन्। कोरोनाबाट बच्न विधिन्न किसिमका उपाय अबलम्बन गर्न आग्रहगरिएको छ । आज हामी फोक्सोलाई कसरी घरेलु विधिबाट सफा राख्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउँदै छौं । चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा पहिला दुग्धजन्य पदार्थहरुलाई आफ्नो भोजनबाट टाढा राख्नुहोला । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने दुग्धजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा फोक्सोमा भएका विषाक्त तत्वहरुलाई बाहिर फाल्न शरीरलाई गाह्रो पर्छ । घरेलु विधि प्रयोग गर्ने तरीकाः